Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaxamed Cabdullaahi Farmaajo oo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya
February 8, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale loo yaqaan “Farmaajo” waxa uu ku dhashay Muqdisho sanadkii 1962-dii. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u doortay madaxweynaha cusub ee dalka, sida ay sheegayso natiijada rasmiga ah ee doorashada.
Farmaajo ayaa helay 184 cod, halka musharixii ugu dhowaa Xasan Shiikh Maxamuud uu helay 97 cod inta lagu guda jiray wareegii labaad ee cod bixinta.
Madaxweynaha xilka ka degaya ayaa aqbalay natiijada doorashada.
Ku dhawaad 329 xildhibaan oo ka socda labada aqal ee kan hoose iyo midka sare ayaa doortay madaxweynaha cusub.
Cod-bixinta ayaa ka dhacday goobta Afisyoone oo kutaala garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Adan Cade oo kuyaala caasimada, Muqdisho.
Ugu yaraan 20 musharax oo uu kamidyahay madaxweynaha xukunka ka degaya ayaa ku loolamay doorashada.
Madaxweynaha cusub ayaa xafiiska loo dhaarshay isla-markiiba kadib natiijada.
Farmaajo ayaa xafiiska hayn doona muddo afar sanno ah, munaasabada caleemosaarka ayaa dhici doonta maalmaha soo aadan.
Waa kuma Farmaajo?
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale loo yaqaan “Farmaajo” waxa uu ku dhashay Muqdisho sanadkii 1962-dii.
Intii u dhaxaysay 1989-kii ilaa iyo 1993-dii, waxa uu dhammeeyay digreeka kowaad oo uu ku diyaariyay taariikhda isaga oo dhigtay jaamacada Buffalo. 2009-kii waxaa uu heerka labaad ee jaamacada ku diyaariyay culuumta siyaasaddda isaga oo ka dhigtay isla jaamacadii Buffalo.
14-kii Oktoobar, 2010-kii, Farmaajo waxaa loo doortay Raysulwasaaraha Soomaaliya xilligii maamulkii Shariif Shiikh Axmed.
Bilowgii sanadkii 2012-kii, waxa uu asaasay xisbiga siyaasadda Tayo.
Mr Farmaajo waxa uu kasoo jeedaa mid kamid ah qabiilooyinka waa-weyn ee Soomaaliya, Daarood.
January 11, 2017 Baarlamaanka Soomaaliya oo mar labaad guddoomiye u doortay Jawaari
January 22, 2017 Xildhibaanada aqalka sare ee DFS oo Cabdi Xaashi Cabdullaahi u doortay afhayeen
August 5, 2017 Baarlamaanka Soomaaliya oo tuuray mooshin ka dhan ahaa Wasiirka Arrimaha Dastuurka
Mohamed Abdullahi Farmajo elected as Somali President
Madaxweynaha Puntland oo bulshada ka codsaday in ay ka qeybgalaan hanaanka dimuqraadiyaynta
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa dadweynaha gaar ahaan dhalinyarada ka codsaday in ay ka qeybgalaan hanaanka dimuqraadiyaynta Puntland. Isaga oo la hadlayay bulshada fiidnimadii Isniinta, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in ay ka go’antahay hirgalinta [...]
Ganacsade lagu dilay magaalada Laascaano
Laascaanood-(Puntland Mirror) Nin ganacsade ah ayaa xalay lagu dilay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Niman hubeysan oo aan la garaneyn ayaa toogtay oo dilay Maxamed Cabdi Timir. Nimanka hubeysan ayaa [...]